दंगाग्रस्त घोषणापछि अब के हुन्छ ? – Peacepokhara.com
दंगाग्रस्त घोषणापछि अब के हुन्छ ?
काठमाडौं ७ भदौ । कैलालीको टीकापुरलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुअघि गृहमन्त्रालयमा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले उपप्रधानमन्त्री एबम् गृहमन्त्री बामदेव गौतमलाई परिस्थितिको ब्रिफिङ गरे ।
रौतहट र सर्लाहीमा पनि दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने हो कि भन्ने छलफल चले पनि अहिले कैलाली बाहेक अरु भागहरु प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको निकश्र्ष निकालिएको स्रोतले जनाएको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ (ख) अनुसार एउटा जिल्लाको कुनै निश्चित क्षेत्र प्रहरीको नियन्त्रण बाहिर जान थालेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेना परिचालन गर्न सक्छ ।
दंगाग्रस्त क्षेत्रमा ५ जना भन्दा बढी एकै ठाउँमा हिँड्न निषेध गरिएको छ । त्यस्तै व्यक्तिका पसल, घर तथा गोदामहरुमा शंका लागेमा सेनाले खानतलासी गर्ने र शंकास्पद लागेका सामाग्री जफत गर्नेछ । आवश्यक खाद्य तथा अन्य सामाग्रीहरु सेनाले आपूर्ति गर्नेछ । कम्तिमा एक महिना यो दंगाग्रस्त क्षेत्र कायम रहने र आवश्यकता अनुसार थपिन सक्ने ढकालले बताएका छन् ।
शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि यो कदम बाध्यकारी भएको उनले बताए । ढकालले भने-यो अवस्थामा सेनाले त्यो ठाउँको परिस्थिति आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्छ । तर त्यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशन र समन्वयमा हुन्छ ।
peacepokhara 19 Apr 2015
peacepokhara 21 Jun 2015